Kedu ihe bụ IRA Direction nke IRA na-aga-aga na Otu esi ahazi elu
Gịnị bụ IRA na-eduzi onwe gị?
IRA na-eduzi onwe gị bụ akaụntụ onye lara ezumike nká na-enye gị nhọrọ ọnụọgụ ego dị ukwuu karịa ka onye nlekọta IRA ọkọlọtọ kwere. Imirikiti ndị nchekwa IRA bụ ụlọ akụ ma ọ bụ ndị na-ere ahịa. Naanị ha na-ahapụ ụgbọ ala ndị na-etinye ego iji tinye onwe ha uru ego. N'aka nke ọzọ, IRA na-eduzi onwe gị, nwere onye na-elekọta gị nke na-enye gị ohere itinye ego gị IRA n'ọtụtụ nhọrọ sara mbara ka akwadoro n'okpuru koodu IRS.
Ọtụtụ ndị na-elekọta ụlọ ọrụ IRA na-enye ohere itinye ego na ebuka, agbụ, ego na ibe na CD. Onye na-elekọta mmadụ IRA na-eduzi onwe ya na-enye ụdị ụdị itinye ego ya na mgbakwunye ụlọ, ndetu, itinye onwe ya, asambodo ụtụ isi na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọtụtụ ndị mmadụ ga-erite uru site na njirimara nke na-eduzi IRA.
Enwere uru ụfọdụ ịnweta inwe otu ihe ahụ ma ọ bụ karịa LLC, dị ka nchedo akụ na ụba na mgbanwe mgbanwe. Ndokwa a bụ maka ndị chọrọ n'ezie ịnwe njikwa Pọtụfoliyo Ego ha. Ndị ntinye ego dị otú a nwere ike iwelie ọnụego nloghachi ha, belata ụgwọ ọrụ, ma nye ha ikike ịme mkpebi ngwa ngwa ngwa ngwa.
Nke a abụghị ihe ọhụrụ. Ndị na-achụ ego enwetawo ikike iji aka ha na-eduzi ego ha na-etinye na itinye ego n'ime nhọrọ ebe ma họrọ uru ụtụ isi na-akwụghị ụgwọ kemgbe 1974. N'afọ 10 gara aga ma ọ bụ karịa, akụrụngwa itinye aka na ntanetị, natara ihe kachasị na mgbanwe, nke ịnweta na ijikwa Limitedlọ ọrụ Mkpebi Nke Oke.
Mepee ndi ohuru IRA ka o ghazie onwe gi ma gha ahazi ndi IRA Limited Liability Company
Kpoo ego nile dị adị na akaụntụ ezumike nka ọhụrụ gị
Mepụta LLC ọhụrụ nke IRA ọhụrụ nwere (nke nwere nkwekọrịta ọrụ pụrụ iche etinye n'ụzọ pụrụ iche)
Bugharịa ego IRA na akaụntụ akụ nke LLC gị n'aka onye na-elekọta IRA
N'enye akwukwo LLC mmasi inwere mmasị nke onye otu gi
Site na usoro a dị n’elu, inwere onwe gị itinye ego ezumike nka. Ọ dị mfe dịka ịbanye akara ego. Nke a na-emepe ọtụtụ ụzọ iji nweta ohere itinye ego, dị ka ala na ụlọ, ọla edo, na ụlọ ọrụ ndị nwere naanị ya. Ihe a choro bu ihe LLC gi kwekọrọ na ihe IRS / DOL choro ma ị na-eme ntinye ego anabatara. Iji maa atụ, ịnweghị ike ịzụta ezumike n'ụlọ site na IRA LLC na ezumike n'ime ya. Onweghi onye ichota onwe ya. Ọmụmaatụ, ịgaghị enwe ike ịzụta ụlọ ma ọ bụ akụrụngwa ọzọ n'aka gị nke ị nwere. Agbanyeghị na enwereghị ihe dị na ya, iwu ndị a bụ maka itinye ego ziri ezi. Hụ ntuziaka IRS.
Jiri ọnụọgụ dị na peeji a ma ọ bụ mpempe akwụkwọ iji jupụta onye na-enye gị ndụmọdụ.
Kedu ihe IRA LLC nwere ike ime?
Mee mkpebi itinye ego ngwa ngwa: Buzụta ihe ndị a na-ahụ maka ụlọ bụ ihe atụ doro anya nke itinye ego ngwa ngwa. You nwere ike ịme ihe gbasara ego na-enweghị onye na-elekọta ya na-egbochi usoro ahụ ma ọ bụ na-akwụghị ụgwọ oke.
N’ezie, n’ụzọ dabara adaba, ịgbanye ego gị n’ahịa: can nwere ike mejuputa ego ezumike nka gị maka ọtụtụ uru ụtụ isi na-adịghị. Dịka ọmụmaatụ, LLC gị nwere ike ịme mgbazinye obere oge ma ọ bụ ogologo oge na ụlọ, ụgbọala ma ọ bụ azụmaahịa, ma kwụọ ụgwọ dị elu karịa ụlọ ọrụ ịgbazinye ọdịnala.
Chekwaa ego ma nwekwuo ikike: can nwere ike ịzụta ihe mgbazinye, wee nyochaa ụlọ nke aka gị wee jikwaa ya n'onwe gị, na-ezere ọnụ ahịa njikwa akụ.
Inwere onwe gị ide akwụkwọ nlele site na akaụntụ akụ akụ LLC gị na itinye ego nke nhọrọ gị n'enweghi nkwado ọ bụla, ụgwọ nyocha ma ọ bụ ụgwọ azụmahịa nke na-esite na ngwa ọrụ itinye ego ezumike nká na-enwekwu ohere, njikwa, nchekwa na ọtụtụ ugboro - nnukwu mmụba .
Ihe ndị na - eme nke a dị mfe. Self ji aka gị duzie IRA dị ugbu a itinye ego na LLC nọrọ na nzuzo. Ndị IRA gị nwere ọmụrụ nwa otu narị ụlọ ọrụ ị na-elekọta, na-etinye ego gị lara ezumike nká. Onweghi nsogbu di ole ma ole ka amachibidoro ahia ahia di na ya isoro ndi ozo nwe mmekorita; otu ihe metụtara gị ịbụ gị na ezinụlọ gị. Lee Iwu IRS maka nkọwa nkenke. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ itinye aka na aka ogologo niile ga-abụ nke ziri ezi na enwere ọnụọgụ iwu enwere ike ịme. Gwa onye nwe ikikere ma obu onye ndumodu ego aka gi banyere onodu gi maka ihe omuma. Na mgbakwunye, onye na-elekọta IRA na-eduzi onwe gị nwere ike inye aka duzie gị.
Tingtọlite ​​ihe IRA LLC bụ azụmahịa azụtara nke ọtụtụ; I choro IRA nke aka gi, mgbe ahu I d’inye onye na-elekọta gi aka IRA ka itinye ego na LLC guzobere, ekwesiri ka emepee ulo akwukwo, na ikpe azu IRA LLC. Ozugbo emechara ihe ndị a niile, ị nwere ike ịmalite itinye ego tinye aka na akaụntụ ezumike nka gị.
Ọ dị oke mkpa ka ejiri hazie ihe ndị a n'otu usoro, na nkwekọrịta na nhazi akwụkwọ niile ga-ahazi maka IRA yana na IRA na-akwụ ụgwọ maka usoro ahụ dum. Ọ bụrụ na onye nwe ụlọ IRA n'onwe ya na-akwụ ụgwọ maka nke a, akaụntụ ahụ dum nwere ike ịbụ azụmahịa a machibidoro iwu. Ókèala IRS dị na nke a doro anya yana nnukwu nsonazụ maka ịdaba n'akụkụ ọjọọ nke usoro azụmahịa amachibidoro. Ọ bụ ihe kachasị mkpa na onye ọkachamara nwere ahụmahụ duzie usoro gị na onye ọka iwu ma ọ bụ ndụmọdụ onye ndụmọdụ ụtụ isi ruru eru.
Usoro nke IRA LLC gunyere ihe ndia:
LLC Aha Nyochaa na ndoputa n’ime Nhọrọ nke steeti gị
Nkwadebe na Mkpochapu Edemede Gi
Dọkụmentị Ejiri steeti ị hotara
Edere ngwugwu dọkụmentị site na ozi mbu
Nchoputa ulo oru di nkpa
Kit Kit zuru ezu
Mpempe akwụkwọ ọsọ ọsọ
Mpempe ntuli aka S-Corporation
Nọmba Nọmba EIN
Ntinye (tax) nkewa
Aka Nyocha Oru IRA LLC
Enyemaka maka ịtọlite ​​akaụntụ ịlele azụmaahịa ọhụrụ maka LLC guzobere
Inye ego maka IRA LLC gunyere usoro ndia:
Imepe ego ohuru maka IRA LLC
Ingnye mmasị otu onye chọrọ ka IRA duzie gị
Nnabata nke nkwekọrịta ọrụ
Ntinye nke onye isi njikwa LLC
Nnabata nke akwụkwọ na nkwekọrịta niile
Transfernyefe ego ndị IRA
MARA: Ejighi usoro a guzobe na-enweghị enyemaka ndị ọkachamara.
Kpọọ nọmba na peeji a ma ọ bụ jiri akwụkwọ nyocha iji nweta enyemaka.
Onwe-eduzi IRA LLC bu ebe ndi mmadu hiwere IRA zuta, ma obu itinye ego na, ulo oru ohuru ma na nkea, obere ulo oru mkwadoro iwu. Ndi IRA na-eduzi onwe ya nwere ndi aka gi nile, ma gi onwe gi bu onye IRA, jikwaa LLC ohuru. Oche njikwa nke a nke LLC na-enye njikwa akwụkwọ nyocha wee mepee ohere itinye ego maka ego ezumike nka zuru oke. Na-eme akaụntụ IRA gị dịka onye nwe (onye nwe) nke LLC ma kenye onye njikwa ụlọ ọrụ nke nwere ike ịnata ụgwọ maka ọrụ. Onye njikwa LLC ga na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ kwa ụbọchị dị ka imezu nkwekọrịta, ijikọ ego na ịbịanye ego dị ka enyere ya ndụmọdụ. Ọ dị ezigbo mkpa na ịchọrọ enyemaka nke ọkachamara nwere ahụmahụ banyere otu esi ahazi LLC na atụmatụ nchịkwa gị maka IRA.
Enwere ụkpụrụ, usoro na iwu dị mkpa ịgbaso, karịchaa na mbido mgbe izizi ntọala nke onwe gị IRA LLC. Nke kachasị, IRA ugbu a na-eduzi gị ga na-azụta mbak nke LLC, nke pụtara na IRA ga-abụrịrị onye guzobere, mgbe ahụ ị ga - eduzi ego ezumike nká gị n'ime LLC ọhụrụ a.
Otutu ndi mmadu anaghi acho imeputa onwe ha IRA LLC, ha na-echigharịkwuru ndi oka mmuta nke ndi n’oru ihe edere iji dozie ma nyejuputa nguzo ha.
Abtọlite ​​IRA LLC nke chọrọ onwe ya ka ekwesịrị ịme ya n'usoro iji zere nsogbu ndị ga - eme n'ọdịnihu. Ọ dị mkpa na imepụta ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na imepụta ego maka ịla ezumike nka n'usoro na nkwekọrịta mmezi nkwekọrịta ụlọ ọrụ dị n'ime ime. Enwere ike machibidoro azụmahịa iji bụrụ na etoliteghi ma ọ bụ dozie IRA ma ọ bụ LLC. Azụmaahịa ndị amachibidoro bụ akwara Achilles nke ị nweta ụgwọ dị ala na uru itinye ego na ụtụ isi na-akwụghị ụgwọ. Ọ bụrụ na IRA LLC gị na-enyocha microscope, ọ kacha mma mgbe niile na nzukọ gị na nhazi gị ziri ezi. Pricegwọ nke ọrụ IRA LLC bụ oke iji zere nsogbu nke ọdịdị a.
Azụmahịa dị naanị maka ndị na-erite uru ezumike nká ma ọ bụghị n'etiti ndị ọzọ na-erughị eru. Nke a ka akọwapụtara nke ọma n'okpuru, maka nkọwapụta, lee akwụkwọ IRS na ndị ọzọ ezughi oke;
Onye nwe ulo IRA ma obu onye di ya
Ezinaụlọ onye nwe ụlọ, ụmụaka, nne na nna wdg
Ndi mmadu nke kariri 50% nke onye achupuru achupu
Onye nwe 10% onye nwe ya, onye isi ya, onye isi ya ma obu onye oru ya nwe ihe achupuru ya
Ọrụ nke ndị IRA
Onye ọ bụla nke na-enye ndị IRA ọrụ
N'okpuru ebe a bụ ndepụta nke usoro amachibidoro azụmahịa na ihe ndị ọzọ ị nweghị ike iji IRA LLC nke na-eduzi onwe gị:
Tinye ego ezumike nka n’ebe obibi gị ugbu a
Chokọtara mgbazinye ego na iji ego ezumike nka
Szụtara ndị mmadụ ihe ndị IRA
Gbazinye ego ego na - achọta
Kwụ ụgwọ onwe gị
Yingzụ ihe nchikota
Chazụta mkpuchi ndụ
Enweghị mkpa ịme azụmahịa machibidoro iji ohere itinye ego na-enweghị njedebe nke ndị na-eduzi IRA LLCs na-ebugharị. Site na njikwa akwukwo banyere ego ezumike nka, IRA LLC nke aka ya bu nke kasi elu nke onye obula choro kachasi ihe di iche.
Estlọ ala na ụlọ bụ nnukwu ego na itinye ego ego ezumike nká na IRA LLC. Na-enwe ike ịme mkpebi ọsọ ọsọ dị ka ime ihe na obere ahịa ma nwee ike ị nweta uru maka abamuru nke ego ezumike nka na-akwụghị ụgwọ.
Eji Ya Eji Ya Mee
N'ebe a, ị nwere ike ịga ije na otu atụ banyere etu aga-esi jiri IRA LLC mee ihe maka mmụba dị elu nke ego ezumike nka. Etu esi eji IRA LLC.
$ Nwere $ 150,000 na akaụntụ IRA wee kpebie na ịchọrọ itinye ego ndị ahụ na ezigbo ụlọ nke ị nwetara site na nkwanye ibu. Meputara LLC ya na nkwekorita oru na-edeputa onye otu ya dika aka na aka gi IRA. You ga-ahazi ụlọ akụ maka LLC wee kuzie onye na-elekọta gị IRA ka ọ kpọọ ekwentị 150,000 $ na akaụntụ akụ LLC.
Site na IRA LLC a haziri ahazi nke ọma, nke kwadebere ma kwụọ ụgwọ, ịnwere ike ịwụli elu ma zoo ahịa ndị ahụ a na-ere ozu. Spend na-emefu $ 120,000 wee nweta ụlọ anọ, nke a ga-azụta ma nye ya aha LLC nke IRA nwere. Gbazite ụlọ ọ bụla maka afọ ole na ole ma mmefu, ụtụ isi, mkpuchi na mmezi na-akwụ ụgwọ maka ụlọ ọrụ site na iji akaụntụ LLC. Inye ego na ulo na abia na LLC. Ebe ọ bụ na LLC nweziri IRA, uru dị na ụtụ isi. Ka uru ụtụ isi na-abatabeghị, LLC nke dị n’ime IRA gị nwere ike ịzụta ala, ọla edo, ngwaahịa ma ọ bụ akụ ndị ọzọ iji mee ka mgbanwe dị na pọtụfoliyo ezumike nka.
Ọ bụrụ na nke ọ bụla n’ime mgbazinye ụlọ gị kwụrụ $ 500 na ntanetị ego ga-apụta na 16% ga-abawanye na nnuku ego. Mgbe ị dịla njikere ire ụlọ ndị ahụ, ị ​​ga-etinye ebe a na-ejide ego na IRA gị nwere ike inweta ego na-akwụghị ụtụ isi. Na-erere ụlọ gị maka $ 200,000 nke ebufefere na akaụntụ akụ LLC. $ 150,000 mbu gị etoola ka $ 272,000.
Iwu General nke mkpịsị aka ukwu maka ndị nwe IRA
Otu esi egbochi ahia amachibidoro iwu. Ndị nwe IRA LLC, ezinụlọ, nwunye ma ọ bụ sitere n'agbụrụ ekwesịghị:
Nweta ihe onwunwe ma ọ bụ nkesa site na IRA LLC.
Uru ma ọ bụ jiri ihe ọ bụla nke IRA.
Kwụ ụgwọ mmefu ọ bụla.
Kweta ego site n'aka ndị IRA.
Na-eme azụmahịa ọ bụla.
Nye oru, kwụọ ụgwọ ma ọ bụ ghara, ka IRA LLC.
Ọ bụrụ na a na-elele ntinye anya ogologo ọ bụla na-abụghị ogwe aka gị, ị ga-agakwuru onye ndụmọdụ gbasara azụmahịa. Enwere ọtụtụ ụzọ enwere ike igbochi azụmahịa a, ọtụtụ gụnyere ịgwakọta ọrụ na mmefu na ihe IRA LLC. Ọ bụrụ na ejighi n'aka, jụọ onye CPA ma ọ bụ ọkachamara ọzọ ruru eru. Soro na-eme mmemme ijide n'aka na enyere gị ikike.
Enwere otutu ihe maka ndị nwe IRA ịghọta mgbe ha na-akpụ LLC. Ọ bụ ụgbọ ala nwere nzube maka ngwa ahịa nke chọrọ nlezianya kpụọ. Nkwekọrịta gị na-arụ ọrụ, ọkwa ụtụ, usoro nke ịnwe ya, usoro ịkpa arụ niile chọrọ ndokwa ndị IRA pụrụ iche. Otu nzukọ tụkwasịrị obi kwesịrị ịkwadoro nke a.
IRA ala na ụlọ na-enye ndị nwe akaụntụ ịla ezumike nká ohere iji ego IRA zụta ala na ụlọ, ụtụ isi. Nwere ike ịzụta ụlọ ngwa ngwa dị ka edere akwụkwọ ego na ntinye ego gị anabataghị nkwenye ndị ahịa ma ọ bụ ụgwọ azụmahịa. I nwere ike igbatu ugwo ma nweta ego mgbazinye ego na - akwụghị ụgwọ maka itinye ego gị. Formmepụta LLC maka atụmatụ IRA ala na ụlọ nwere ike ịchekwa ma nweta gị puku kwuru puku ijeri jiri aka na-elekọta ọdịnala IRA. Nke a bụ n'ihi na ịnwere itinye ego na ụlọ ọrụ ndị na-ereghị ha n'ihu ọha, na-enyeghị ndị ọrụ ụgwọ, dị ka ụlọ ọrụ ụgwọ dị oke. Gụnyere i nwere ike iji LLC ndị ị na-eji zụta ala na ụlọ na itinye ego ndị ọzọ.
IRA LLC nke na-eduzi onwe ya abụrụla ihe nkwụnye ego maka ịzụrụ ala dị ka akụkụ nke akaụntụ ezumike nká. Nanị ịmepụta IRA LLC nke aka gị na-enyere gị aka ikpebi ebe ị ga-etinye ego gị. You nwere ike ijikwa akwụkwọ nyocha LLC. Ulo oru nke inoghariri n’ime gi bu ulo ahia, ulo ulo, oru ulo, ulo ezinulo, ibuputa ndi otutu. Nwekwara ike ịzụta ndetu, ụtụ ụtụ, ọrụ ụtụ, ihe ala ọzọ ma ọ bụ ụlọ obibi na iji IRA LLC nke aka gị.
Site na LLC maka IRA na-eduzi gị, ị nwere ike:
Mee ịzụta ihe ozugbo - tinye ego na mbu mara ụlọ, nye ụtụ isi ma ọ bụ gbaziri onwe gị.
Bụrụ onye njikwa akụ nke gị (na-arụ ọrụ maka LLC), ma chekwaa ego ma chekwaa njikwa ego gị (gbasie ike ịnweta ndụmọdụ ụtụ isi enyere gị aka).
Zụta ụlọ ezumike nká na uru ahịa nke taa - gbazite ya ruo mgbe ị lara ezumike nká, werezie ya dịka nkesa ezumike nka
Ndị ọkachamara na-atụ aro LLC n'ihi ngbanwe ya ma keta ihe atụmatụ nchekwa ngwa ahịa. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ itinye ego ezumike nká gị n'ime otu ihe ogologo oge, ọnụego ndị ọzọ na usoro iji arụ ọrụ nke IRA LLC adịghị mkpa.
Jiri ndụmọdụ ndị ọkachamara ruru eru na-eduzi gị na usoro a - jide n'aka mgbe niile na amachibidoro azụmahịa ndị a. Mwube ihe LLC na aka nka nwere anya. Mgbe ahụ, debe ndụmọdụ nke onye ọka iwu ikikere na onye nwe akaụntụ. Onye ọka iwu nwere ike inye gị dọkụmentị na-ekwupụta ma azụmahịa ahụ ọ bụ nke iwu ka ọ bụ ihe amachibidoro, Onye ndekọ ego nwere ike inye aka hụ na ị na-agbaso ụtụ isi.
Ike IRA Real Estate ụlọ:
Naanị ndị na-elekọta ụlọ ọrụ IRA ga-ekwe ka itinye ego itinye ego na ụlọ gị maka IRA. Yabụ, IRA ala nke gị IRA na-enye gị ohere ịme mkpebi na ime ihe ọsọ ọsọ, si otú a na-enye gị ezigbo nduzi onwe gị.
Ego ndị isi obodo sitere na azụmaahịa ụlọ na uru ndị a na-enyefe ụtụ n'ụdị ọdịnala IRA ma ọ bụ ụtụ isi na Roth IRA gị ka itinye ego ọ bụla.
Can nwere ike ịnwe njikwa nke ihe ndị dị na ụlọ gị.
RAlọ azụmaahịa ụlọ IRA nwere ike iji ego IRA mebie ịkwụ ego na ịzụta ala na ngwa ngwa.
Obere aka na-eduzi IRA ịkwụ ụgwọ ebe ị na-ejikwa azụmahịa ndị ahụ.
Nihi na ejiri ngwongwo ndi a di na LLC, a na echekwa ihe ndi ahu n’ekepu ya na ndi ozo IRA na nke aka gi.